Maitiro Ekushandura Makowadhi Mafaera kuIzwi Zvinyorwa pa Windows, uye Vice Versa - WebSetNet
Markdown mutauro wekumaka wekugadzira iwo mavara akaumbwa. Zvakanaka, ndizvo zvinoitawo Microsoft Word. Iyo yakanyatsorongedzwa Microsoft Izwi faira inofanirwa kuve yakarongedzwa nenzira senge yakanyatsonyorwa-yakanyorwa Makozha faira. Saka mune zvimwe zviitiko, zvinoshanda zvirinani, kana zvichikwanisika, kuti utange nekumaka wobva wazvishandura kuita gwaro reIzwi. Nenzira iyi, mhedzisiro yacho ichave inenge yakakwana.
Saka heino maitiro.
Kutanga, tungamira kumusoro kune Webhusaiti yePandoc uye dhawunirodha yazvino installer ye Windows. Iyo .msi faira inogona kuiswa nyore nyore pa Windows.
Kamwe yaiswa, pane nzira mbiri dzekushandura iyo Markdown faira.
Kana iwe ukashandisa Typora, yakapepuka-inorema Markdown mupepeti, iwe unogona ikozvino kuvhura iyo faira uye enda kuFaira> Export> Shoko (.docx).
Faira-chengetedza dialog bhokisi rinokwira iwe kuti usarudze kwekuchengetedza gwaro rezwi. Mhedzisiro yacho ingave yakanaka.
Zvino, ko kana ndikasashandisa Typora kana chero imwe Markdown yekugadzirisa?
Ngativhurei rairo yekukurumidza hwindo, uye tinyore murairo unotevera
Inoshanda sedumwa zvakare.
Hechino chidimbu cheruzivo rwekuwedzera nezve Pandoc. Icho chinoshandura gwaro repasirese iro risingangoshandure iyo Markdown faira kune zvinyorwa zvinyorwa asi zvinopesana futi.
Ingomhanya unotevera kuraira uye iwe unowana iyo Markdown faira kubva kugwaro rezwi mune yechipiri.
The post Maitiro Ekushandura Makowadhi Mafaera kuIzwi Zvinyorwa pa Windows, uye Vice Versa yakatanga kutanga Inotevera ya Windows.
Maitiro Ekugadzira murume Peji paLinux
Notes Up ndeyeMarkdown Edhiyo yeLinux
Akanakisa Mahara eMarkdown Editors e Windows
Ungashandure Sei PDF kuGoogle Doc Fomu
Nzira yekubatanidza sei zvinyorwa zvemashoko akawanda mune imwe
23 Electron Zvishandiso Iwe Zvaunofanirwa Kuziva Nezve